Uhlu lweKildare - IntoKildare
UJunior Einsteins Kildare
I-Junior Einsteins Kildare bangabahlinzeki Bezandla Eziwina Umklomelo wokuhlangenwe nakho kwe-STEM okuthakazelisayo, okubandakanyayo, okuvivinyayo, okusebenzayo, okusebenzisanayo, okulethwe ngokomsebenzi Endaweni Eyakhiwe, Ephephile, Egadiwe, Efundisayo Nejabulisayo Izinsizakalo zabo zihlanganisa; […]
E-Airtastic Celbridge, kukhona ubumnandi bayo yonke iminyaka! Imisebenzi yabo ihlanganisa imizila engu-8 iphinikhodi eyishumi ye-Bowling Alley, i-Space Themed Mini Golf Course entsha sha, i-Soft Play enkulu […]
Indawo yaseMaynooth Campus nendawo yokuhlala yenkomfa
Indawo yokuhlala esezingeni eliphezulu ngezizathu zomlando edolobheni lasenyuvesi iMaynooth. Ilungele ukuhlola i-Royal Canal Greenway.
AmaCooks kaCaragh ngumndeni osungulwe kahle ophethwe yiGastro pub, ubelokhu ebambe iqhaza embonini yezivakashi kule minyaka engama-50 edlule.
Eduze neKilkea Castle, iMullaghreelan Wood yindawo enhle yasehlathini elidala enikeza isivakashi isipiliyoni esiyingqayizivele sehlathi.
Hlola izingadi zaseJapan ezidume umhlaba wonke e-Irish National Stud.
Ibhayisikili lami noma iHike
Ibhayisikili lami noma iHike inikeza izinkambo eziqondisiwe ezisendleleni eshayiwe, zilethwe ngendlela esimeme, nochwepheshe wendawo weqiniso.
I-Auld Shebeen Gastro Bar & Canalside B & B itholakala osebeni lomsele e-Athy Co. Kildare. Njengoba bevule iminyango yabo ngoJulayi 2020 kulandela ukubanzi […]
AmaPub & Impilo yasebusukuIndawo yokulala nokulala kwasekuseni
ISt Brigid's Cathedral & Round Tower
Kutholakala endaweni lapho uSt Brigid umphathi waseKildare asungula khona isigodlo ngo-480AD. Izivakashi zingabuka i-cathedral eneminyaka engu-750 ubudala futhi zikhuphuke iRound Tower phezulu kunazo zonke e-Ireland ngokufinyelela komphakathi.
Indawo yokudlela yase-Gallops & Indawo yokudlela
Indawo yokudlela yomndeni isenkabeni yedolobha laseKildare.
Umjaho Academy Ireland
Isikhungo sokuqeqesha sikazwelonke somkhakha wamahhashi waseIreland ohlinzeka ngezifundo zamajokhi, abasebenzi abazinzile, abaqeqeshi bamahhashi omjaho, abalimi kanye nabanye ababambe iqhaza emkhakheni ophelele.
IMongey Communications yibhizinisi eliphethwe ngumndeni elizinze eKildare elikhule futhi lakhula laba umsebenzi wobuchwepheshe bezokuxhumana osezingeni eliphakeme.
AmaNolans Butchers asungulwa ngo-1886 futhi amiswa emgwaqeni omkhulu wedolobhana elincane eCree Kildare elaziwa ngokuthi yiKilcullen ngabazalwane baseNolan.
Amapompo e-GlennGorey "ayisitolo sakho esisodwa" sazo zonke amaphampu wamanzi nezidingo zokufaka
Inkampani yeNew Wine
INude Wine Co yiwayini njengoba kuhloselwe imvelo. Bayazifela ngewayini futhi bakholelwa ukuthi uma usondela kakhulu emvelweni, kungcono kuwo wonke umuntu.
Inkundla Yezemidlalo YaseMoyvalley
Idizayinwe nguDarren Clarke, iMoyvalley Golf Club iyikhosi yezifundo ezingama-72 eziwalungele wonke amazinga abagibeli begalufu.
IKilkea Golf Course
IKilkea Castle ayigcini nje kuphela kwesinye sezinqaba ezindala kunazo zonke e-Ireland kodwa futhi ibuye ibe yinkundla yegalofu.
Carton House Igalofu
Kutholakala eMaynooth, iCarton House Golf inikela ngezifundo ezimbili zobuqhawe, iMontgomerie Links Golf Course ne-O'Meara Parkland Golf Course.
Izifundo zePalmer Golf - The K Club
I-5 Star K Club Hotel & Golf Resort ingelinye lamahhotela amahle kakhulu e-Ireland anenye yezifundo zegalufu ezihamba phambili e-Ireland, eyenzelwe ngomunye wabadlali abakhulu kumlando wezemidlalo, u-Arnold Palmer.
IDonadea Forest Park
IDonadea inikela ngezindlela ezahlukahlukene zawo wonke amazinga wesipiliyoni, kusuka ekuzuleni okuncane kwemizuzu engama-30 uzungeze ichibi uye kumzila we-6km okuhambisa nxazonke zepaki!
Umzila waseKildare Town Heritage
Thatha elinye lamadolobha amadala kakhulu e-Ireland afaka iSt. Brigid's Monastic Site, iNorman Castle, ama-Abbeys amathathu asendulo, iTurf Club yokuqala yase-Ireland nokuningi.
Umzila we-Kildare Monastic
Hlola izigodlo zasendulo ze-County Kildare ezungeze amanxiwa asemkhathini, eminye yemibhoshongo eyindilinga egcinwe kahle kakhulu e-Ireland, iziphambano eziphakeme nezinganekwane ezithakazelisayo zomlando nezinganekwane.
IBog ye-Allen Nature Center
Enye yezinto eziheha izivakashi zemvelo eziphezulu kakhulu eC .. Kildare ebungaza isimangaliso nobuhle bezindawo eziphakeme zase-Ireland nezilwane zabo zasendle.
IRoyal Canal Greenway
IGreenway ende kunazo zonke e-Ireland isuka ku-130km nge-Ancient East yase-Ireland nase-Hidden Heartlands yase-Ireland. Umkhondo owodwa, ukutholwa okungapheli.
Indlela Yomhloli - Umzila Wamagugu eShackleton
Ukusuka eSouth County Kildare, thola inqwaba yamasayithi axhumene nomhloli omkhulu we-polar, u-Ernest Shackleton.
Umzila kaGordon Bennett
Okufanele kwenziwe kumuntu othanda izimoto zakudala kanye nomshayeli wansuku zonke ngokufanayo, uGordon Bennett Route uzokuhambisa ohambweni oluyingqophamlando emadolobheni amakhulu nasezigodini zaseKildare.
Ngasemaphethelweni eClan Village leli hhotela lihlanganisa ukufinyeleleka nomuzwa wokusuka edolobheni.